ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးစပ်ထားတဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာနေသူတွေကို ထိထိမိမိသတိပေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် – The News Post
ဆောင်းဦးလှိုင် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂီတလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် လျှောက်လှမ်းလာခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Pop အဆိုတော် တစ်‌ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဦးလှိုင်ဟာ လတ်တလော မှာတော့ ပြည်ပမှာ နေထိုင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေနဲ့အတူ ဂီတလှုပ်ရှားမှုတွေ ဆက်လက်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဆေးပညာဘွဲ့ရတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီး ကိုယ်တိုင်သီဆို ခဲ့တဲ့ တကိုယ်တော်တေး Album ပေါင်း ၁၀ ချပ်ထက်မနည်း ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ကိုယ်ဟန်နဲ့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတ် ရင်ထဲရောက်အောင် သီဆိုနိုင်သူ တစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
လက်ရှိမှာ ဆောင်းဦးလှိုင်က နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာ တတ်တတ်ကြွကြွ ပါဝင်နေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ဆောင်ဦးလှိုင်ကာ Cover song သီဆိုတဲ့သူတွေ များပြားလာ တာကြောင့်သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းတွေကို ကိုယ်ကျိုးရှာသူတွေအတွက် အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုပြီး ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်ဦးလှိုင်က“ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ “ဂျပန်အမျိုးသမီး အဆိုတော်ဟာ ရန်ကုန်မှာပွဲလုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီက ခွင့်တောင်းပြီးမ ဆိုတာပါ။ ဂျပန်လို ဘာသာပြန်ပြီး အနည်းငယ်ဆိုခွင့်ပြုဖို့ပါ ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကြွားဝါတာတွေ ဘယ်တော့မှ ရေးတင်လေ့မရှိလို့ လူအများမသိကြပါ။ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Original Songs တွေကိုလူအများစုက တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
အလွန်တရာယုတ်ညံ့သူတချို့သာ အပုတ်ချသူချ၊အသုံးချ ကိုယ်ကျိုးရှာသူရှာ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။Google နဲ့ YouTube ဟာ သီချင်းတွေကိုယ်ပိုင်သံစဉ်ဟုတ်မဟုတ် နည်းပညာနဲ့စစ်ဆေးပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်း အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ခေတ်ကြီးပါ။ကျွန်တော့် Own Tune တွေ အဟောင်းရောအသစ်ပါတစ်ပုဒ်မှ Copyrights နဲ့မငြိပါ။ ဆိုလိုတာကOriginal songs ( မြန်မာအခေါ် Own Tune ) လို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ရာကို မြန်မာအဆိုမြန်မာစာသားနဲ့မကြားရတာကြာခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလား ?? ( အထူးသဖြင့် Live shows & cover songs )အဖြေကရှင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ခွင့်မပြုတော့လို့ပါ။အများအကျိုးအတွက် ခွင့်ပြုချက်တောင်းလာတဲ့အခါမှသာ စဉ်းစားပါမယ်။ ကျွန်တော့်သီချင်းအားလုံးကျွန်တော့်ရင်သွေးများ ဖြစ်ပါကြောင်း။ အလွန်တန်ဖိုးထားပါကြောင်း။ဆောင်းဦးလှိုင် May 25th 2022 ” ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…။
ဆောငျးဦးလှိုငျ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဂီတလောကမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျအောငျ လြှောကျလှမျးလာခဲ့တဲ့ နာမညျကြျော Pop အဆိုတျော တဈ‌ယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဆောငျးဦးလှိုငျဟာ လတျတလော မှာတော့ ပွညျပမှာ နထေိုငျနပွေီး ကိုယျပိုငျသံစဉျ သီခငျြးတှနေဲ့အတူ ဂီတလှုပျရှားမှုတှေ ဆကျလကျပွီးတော့ လုပျဆောငျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။သူဟာ ဆေးပညာဘှဲ့ရတဈဦးလညျး ဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ ကိုယျတိုငျရေးသားပွီး ကိုယျတိုငျသီဆို ခဲ့တဲ့ တကိုယျတျောတေး Album ပေါငျး ၁၀ ခပျြထကျမနညျး ထှကျရှိခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ သီခငျြးတှကေို ကိုယျပိုငျသံစဉျနဲ့ ကိုယျဟနျနဲ့ အသံအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတျ ရငျထဲရောကျအောငျ သီဆိုနိုငျသူ တဈယောကျဆိုလညျး မမှားပါဘူး။
လကျရှိမှာ ဆောငျးဦးလှိုငျက နိုငျငံခွားမှာ ရောကျနပေမေယျ့ နှဦေးတျောလှနျရေးကွီးမှာ တတျတတျကွှကွှ ပါဝငျနေ တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ဒီတဈခါမှာဆိုရငျတော့ ဆောငျဦးလှိုငျကာ Cover song သီဆိုတဲ့သူတှေ မြားပွားလာ တာကွောငျ့သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျသံစဉျနဲ့ ဖနျတီးထားတဲ့ သီခငျြးတှကေို ကိုယျကြိုးရှာသူတှအေတှကျ အသုံးပွုခှငျ့မပေးဘူးဆိုပွီး ပွောလာတာဖွဈပါတယျ။ ဆောငျဦးလှိုငျက“ မြှျောလငျ့ခကျြတဈစုံတဈရာ “ဂပြနျအမြိုးသမီး အဆိုတျောဟာ ရနျကုနျမှာပှဲလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဆီက ခှငျ့တောငျးပွီးမ ဆိုတာပါ။ ဂပြနျလို ဘာသာပွနျပွီး အနညျးငယျဆိုခှငျ့ပွုဖို့ပါ ခှငျ့တောငျးခဲ့ပါတယျ။ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ကွှားဝါတာတှေ ဘယျတော့မှ ရေးတငျလမေ့ရှိလို့ လူအမြားမသိကွပါ။ကြှနျတေျာ့ကိုယျပိုငျသံစဉျ Original Songs တှကေိုလူအမြားစုက တနျဖိုးထားကွပါတယျ။
အလှနျတရာယုတျညံ့သူတခြို့သာ အပုတျခသြူခြ၊အသုံးခြ ကိုယျကြိုးရှာသူရှာ လုပျခဲ့ကွတာပါ။Google နဲ့ YouTube ဟာ သီခငျြးတှကေိုယျပိုငျသံစဉျဟုတျမဟုတျ နညျးပညာနဲ့စဈဆေးပွီးမိနဈပိုငျးအတှငျး အဖွထေုတျပေးနိုငျတဲ့ခတျေကွီးပါ။ကြှနျတေျာ့ Own Tune တှေ အဟောငျးရောအသဈပါတဈပုဒျမှ Copyrights နဲ့မငွိပါ။ ဆိုလိုတာကOriginal songs ( မွနျမာအချေါ Own Tune ) လို့သတျမှတျခံခဲ့ရပါတယျ။ မြှျောလငျ့ခကျြတဈစုံတဈရာကို မွနျမာအဆိုမွနျမာစာသားနဲ့မကွားရတာကွာခဲ့ပွီမဟုတျပါလား ?? ( အထူးသဖွငျ့ Live shows & cover songs )အဖွကေရှငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောခှငျ့မပွုတော့လို့ပါ။အမြားအကြိုးအတှကျ ခှငျ့ပွုခကျြတောငျးလာတဲ့အခါမှသာ စဉျးစားပါမယျ။ ကြှနျတေျာ့သီခငျြးအားလုံးကြှနျတေျာ့ရငျသှေးမြား ဖွဈပါကွောငျး။ အလှနျတနျဖိုးထားပါကွောငျး။ဆောငျးဦးလှိုငျ May 25th 2022 ” ဆိုပွီးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော…။